DISTRIKAN’ANTALAHA : Mpangalatra lavanila naratra mafy niharan’ny fitsaram-bahoaka
Fantatra fa manao ranolava ny fitrangan’ny halatra lavanila ao anatin’ny Distrikan’Antalaha iny. 11 janvier 2017
Mandry tsy lavoloha ireo mpamboly satria misoko mangina amin’ny alina ireo mpangalatra. Tsy mamela mahazo intsony izy ireo vokatr’izany fa avy hatrany dia iharan’ny fitsaram-bahoaka izay tratra.
Ny alin’ny alahady teo, lehilahy iray no naratra mafy niharan’ny fitsaram-bahoaka tao Andampy ao anatin’ny Distrikan’Antalaha. Divi-janahary sisa no tsy nahafaty ity farany noho ny fahatongavan’ny mpitandro filaminana faran’izay haingana teny amin’ilay toerana nisehoan’ny halatra. Roa lahy izy ireo no fantatra fa nijoko moramora niditra tao anatina saha iray. Nihevitra izy ireo fa efa matory ny iray tanàna, ka nanararaotra nitango ny vokatra. Tamin’ny tsy nampoizina anefa tonga tampoka ilay raim-pianakaviana tompon’ny lavanila ary avy hatrany dia nitifitra tamin’ilay basy teny aminy ity farany. Voa teo amin’ny tongony ny iray tamin’ireo mpangalatra, ilay namany kosa tafatsoaka.
Avy hatrany dia taitra noho ny poa-basy ny iray tanàna ka nisamaritaka nivoaka ny trano. Raikitra ny fifanenjehana, tsy nandingana teo amin’ny 10 metatra akory dia tra-tehaka ihany koa ity farany. Nodarohan’ny olona tsy nisy nihatra. Naratra mafy efa tsy nisy nahafantarana azy intsony vao tonga ny Zandary. Rehefa nanontaniana izy roa lahy dia niaiky fa fanaony ny halatra lavanila fa tamin’ity indray mitoraka ity vao tratran’ny patsa iray tsy omby vava ry zalahy. Nambarany fa efa misy mpandray izay lavanila halatra azony, amidy 7 000 Ariary monja ny kilao. Mitohy ny fanadihadiana.